Winter Jiri 12v ụgbọala oche ọkụ ọkụ eletriki China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Ụlọ Eletriki ụgbọala,Ojiji Ulo Oji Ugbo eji eme ya,Ebe a na-akpọ oku ụgbọala
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Winter Jiri 12v ụgbọala oche ọkụ ọkụ eletriki
Ihe na-ekpo ọkụ na-echekwa maka ọkụ ọkụ ụgbọ ala. Mee ka ị na-ekpo ọkụ mgbe ị na-akwọ ụgbọala. Ọ dịkwa oke mma maka ihu igwe oyi ma ọ bụ igwe mgbede . Nri ọkụ na-eri mgbe nile na-enye aka iji nọgide na-enwe nkwarụ ma nọgide na-ekesa ọbara . Ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ na kọntaktị dị mma na PVC, ọ bụ nduzi onwe onye, ​​ọ bụ ihe nchekwa na ike ịzọpụta.Ọ bụ cristal crystal printing, nke nwere ụzarị ikuku infrared radiant okpomọkụ.
Spa Spa na aromatherapy okpomọkụ mat Kpọtụrụ ugbu a
Ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ maka Ịkụ nzọkpụ na nke EC Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Ụlọ Eletriki ụgbọala Ojiji Ulo Oji Ugbo eji eme ya Ebe a na-akpọ oku ụgbọala 12v Ụlọ ihe nkiri ụgbọala Egwuregwu Ọkụ eletrik Ụlọ ihe nkiri ụgbọala na Ce Egwuregwu Thermal Eletriki Ebe ọkpụkpọ ụgbọala